Maareynta Tayada - Dinglong Quartz Limited
Waxaan hubin lahayn in badeecadu buuxisay dhammaan shuruudaha. Alaabadayada waxaa lagu hubin doonaa duruufo kala duwan si loo hubiyo inay la kulmi doonaan baahida macaamiisheena leh cabirro buuxda iyo adkeysi.
Ku qanacsanaanta macaamilku waa mudnaanteena ugu sareysa iyo jawaab celinta macaamilku waa ilaha hagaya koritaanka shirkadeena. Waxaan aaminsanahay in shirkaddu ay isbeddelayso markaan dhageysano baahiyaha macaamiisheena.
Jawaab celinta iyo iswaafajintu waxay ka caawin karaan shirkadda inay fahanto shuruudaha macaamiisha, sidaa darteed waxaan sameyn karnaa alaab horumarsan oo la isku halleyn karo oo macaamiisha u oggolaan doonta inay ku tiirsanaadaan.